Vaovao - Fantatrao ve ny momba ny makarakara vy vita amin'ny tavy mafana?
Fantatrao ve ny momba ny makarakara vy vita amin'ny tavy mafana?
Hot-dip galvanized vy vilia, fantatra ihany koa amin'ny hoe vy vita amin'ny tavy mafana vilia, dia akora fanorenana mitovitovy amin'ny grid vita amin'ny vy karbaona ambany fisaka bara sy vy efamira miolakolaka mitsivalana sy mitsangana*. Hot-dip galvanized vyvilia manana fanoherana mahery vaika, fanoherana harafesina matanjaka ary fahaiza-manao enta-mavesatra, kanto sy tsara tarehy, ary manana fahombiazana ambony amin'ny fotodrafitrasa ara-tanàna sy ny tetikasa fananganana sehatra vy. Ny fahombiazan'ny vidiny avo dia ny vy vita amin'ny galvanized mafanavilia dia ampiasaina betsaka amin'ny tetik'asa fanamboarana ny lalan'ny tatatra amin'ny sisin-dalana taloha sy vaovao.
Ny tampon'ny vy vita amin'ny galvanized mafana vilia dia tsaboina amin'ny fitsaboana mafana-dip galvanizing manokana, ary ny zavatra simika sy ara-batana dia miorina tsara ary tsy mora oxidized amin'ny rivotra sy ny harafesiny mikraoba. Afaka mampitombo be ny herin'ny famenoana tatatra izany. Misoroka ny fianjerana. Ny vy galvanised mafanavilia miaraka amin'ny elanelana vy fisaka 3 sm dia manana fanoherana lehibe kokoa ary manana amplitude lehibe. Ny ela ny fiainana fanompoana, amin'ny ankapobeny ao anatin'ny 40 - 50 taona. Hot-dip galvanized vyvilia dia rafitra rafitra vy tena tsara sy sehatra mahazaka enta-mavesatra raha tsy misy fahasimbana hita.
Hot-dip galvanized vy vilia dia vita amin'ny enta-mavesatra fisaka barany sy ny hazo fijaliana hidin-trano nandamina warp sy weft amin'ny elanelana sasany, welded * amin'ny tsindry mafy welding milina mba hanao ny tany am-boalohany lovia, ary avy eo dia bebe kokoa nokarakaraina amin'ny alalan'ny fanapahana, notching, fanokafana, wrapping sy ny dingana hafa hanaovana. ny vokatra vita araka izay takian'ny mpanjifa.
Karazana vy vita amin'ny galvanised mafana vilia.
Hot-dip galvanized vy vilia dia mizara ho fanerena welded hot-dip galvanized vy vilia ary ny fanerena mihidy hot-dip galvanized vy vilia araka ny fizotran'ny famokarana; ny endriky ny etỳ ambonin'ny mafana-dip vy tafovilia dia mizara ho nify miendrika hot-dip galvanized vy vilia, fisaka mafana-dip vy tafo vilia, I-karazana vy vita amin'ny tavy mafana vilia ary vy vita amin'ny galvanized mafana vilia.